फोटो ब्लग – MySansar
Category: फोटो ब्लग
कोरोनाले देउता पनि घरैमा : ८ फोटोमा हेर्नुस्, कस्तो खल्लो भयो यसपालिको इन्द्रजात्रा
Posted on September 2, 2020 September 2, 2020 by Salokya
पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँमा आक्रमण गर्दा समेत नरोकिएको इन्द्रजात्रा यसपटक कोरोना महामारीका कारण रोकियो। धेरैले काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक विदा दिइने आज (१६ भदौ, २०७७) को दिनलाई मात्र इन्द्रजात्रा भन्ठान्छन्। तर काठमाडौँको सबैभन्दा रमाइलो यो जात्रा एक दिन होइन, आठ दिन मनाइन्छ। काठमाडौँमा दिनका दिन संक्रमितको संख्या बढिरहेको बेला सयौँ भेला भएर जात्रा गर्नु उपयुक्त पनि हुन्थेन।… Continue reading
१२ फोटोमा झिलिमिली बत्तीले धपक्क बलेको काठमाडौँ
Posted on October 30, 2019 October 30, 2019 by Salokya
तिथि विवादका कारण बुधबार पनि तिहार बाँकी छ। सरकारले पनि बुधबार किजापूजाको विदा दिएको छ। तीन वर्षदेखि झैँ यसपालि पनि उज्यालो चाड तिहारमा विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको समस्या आउन दिएन। पहिलेको तिहारको त अहो, के कुरा गर्नु र। नियमित लोडसेडिङको त कुरै छाडौँ, लक्ष्मीपूजाको दिन जहिल्यै बत्ती जाने। कहिलेकाहीँ त भोलिपल्टसम्म बत्ती आउँदैन थियो। तर कुलमान… Continue reading
सांस्कृतिक र्‍याली, सुन्दरीको टीका, पूर्व कुमारीको बाँसुरी : नयाँ वर्षको उल्लासका ३३ फोटोहरु
Posted on October 29, 2019 by Salokya
नेपाल संवतको नयाँ वर्ष ११४० आजदेखि सुरु भयो। सधैँ झैँ यस पटक पनि न्हू दँको जुलुस काठमाडौँमा वसन्तपुरबाट सुरु भएर नगर परिक्रमा गरी वसन्तपुरमा सभा गरी सम्पन्न भयो। पञ्चायत कालमा भिंतुना र्‍याली निकाल्दा धरपकड गर्ने गरिएकोमा २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि यो र्‍यालीले आधिकारिकता पायो। त्यसबेलादेखि हरेक वर्ष यो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रमुख अतिथि हुने गर्थे। तर… Continue reading
राँगोको सि ङ्गो टा उ कोदेखि मा छा को मु खमा नोटसम्म : इन्द्रजात्राका रोचक १५ दृश्य
Posted on September 17, 2019 September 17, 2019 by Salokya
आज इन्द्रजात्राको अन्तिम दिन हो। साताभर काठमाडौँवासी यो जात्रामा व्यस्त भए, मस्त भए। आज नानिचा याः अन्तर्गत गणतन्त्र आएपछि सुरु भएको महिलाले रथ तान्ने चलनसँगै इन्द्रजात्राको समापन हुन्छ। यस पटकको इन्द्रजात्रामा देखिएका केही रोचक दृश्यहरु आज यो फोटो ब्लगमा राख्ने जमर्को गरेको छु। माथि माछाको मुखमा नोट देख्नुभयो होला नि। खासमा यो समयबजीको माथि सजाइएको… Continue reading
इन्द्रजात्राको रमझम आठ अजिब फोटोमा
Posted on September 15, 2019 by Salokya
यतिखेर काठमाडौँमा उत्सव छ। काठमाडौँमा धुमधामका साथ एक सातासम्म मनाइने यो जात्राको नाम इन्द्रजात्रा हो। आठ दिन मनाइने इन्द्रजात्रामा खिचिएका आठ वटा अजिबका फोटो छन् यसमा। यी फोटोहरु प्रष्ट नहोलान्, तर उत्सव प्रष्ट झल्काउने प्रयास हो। माथिको फोटो श्वेत भैरवको हो जुन इन्द्रजात्राका दिन मात्र यसरी सार्वजनिक रुपमा प्रदर्शन गरिन्छ। अरु दिन आठ वटा झ्यालभित्र… Continue reading
कुमारीको फोटो खिच्ने इच्छा थियो, मोबाइलको खिचियो :)
Posted on September 14, 2019 September 14, 2019 by Salokya
बिहान उठ्ने बित्तिकै मोबाइल, सुत्नुअघिसम्म पनि मोबाइल। कतै भेट्न जाँदा पनि मोबाइल। कतै रेस्टुरेन्टमा खान जाँदा पनि मोबाइल। जहिले पनि मोबाइल, जता पनि मोबाइल। अचेल त फेसबुकमा लाइभ गर्ने सुविधा भएकोले जुनसुकै कार्यक्रममा पनि मोबाइल चल्न थालिहाल्छ। फेसबुकमा लाइभ नगर्ने भए पनि फोटो र भिडियो खिच्नका लागि मोबाइल चलाउनु परिहाल्यो। उहिले झैँ 1.44 mb को… Continue reading
मेरो क्यामेरामा यो वर्षको अन्तिम र १४९ वर्षपछिको संयोग जुरेको चन्द्र ग्रहण
Posted on July 17, 2019 July 17, 2019 by Salokya
यो वर्षको अन्तिम चन्द्रग्रहणका लागि राति अबेरसम्म उठ्नु पर्‍यो। यो चन्द्रग्रहणको अर्को एउटा विशेषता पनि रहेछ- १४९ वर्षपछि गुरुपूर्णिमाको दिन ग्रहणको संयोग जुरेको रहेछ। काठमाडौँमा बादलले नछेकेको भएर ग्रहण मज्जाले हेर्न पाइयो। राशी अनुसार हेर्न नहुने भने पनि हेर्ने रहरलाई के छेक्न सक्थ्यो। क्यामेरा तेर्स्याएर हेरियो। अनि यी फोटोहरु पनि बाँडियो।
वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्डसको नेचुलर वर्ल्ड एन्ड वाइल्डलाइफ विधामा छानिएका गजबका फोटोहरु
Posted on February 8, 2019 by Salokya
यो वर्षको सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्डसमा १९५ देशबाट ३ लाख २६ हजार वटा फोटोहरु पठाइएका छन्। ती मध्येबाट नेचुलर वर्ल्ड एन्ड वाइल्डलाइफ विधामा छानिएका वन्यजन्तुका केही गजबका फोटोहरु हेरौँ।
वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्डसमा नेपाली फोटोसित प्रतिस्पर्धा गर्ने फोटोहरु यस्ता छन्
Posted on February 6, 2019 February 6, 2019 by Salokya
यो वर्षको सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्डसमा १९५ देशबाट ३ लाख २६ हजार वटा फोटोहरु प्रतियोगिताका लागि पठाइएकामा नेपालीको एउटा फोटो सर्टलिस्टमा पर्न सफल भएको बारे हिजोको ब्लग यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्। दिक्पाल थापाको मह शिकारीहरुको फोटो कल्चर विधाको ओपन कम्पिटिसनमा सर्टलिस्टमा पर्न सफल भएको हो। यो विधामा १३ वटा फोटोहरु सर्टलिस्टमा परेका छन्। त्यसमध्ये तीन… Continue reading
यो हो सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्डसको सर्टलिस्टमा पर्न सफल नेपालीको फोटो
Posted on February 5, 2019 February 5, 2019 by Salokya
यो वर्षको सोनी वर्ल्ड फोटोग्राफी अवार्डसको सर्टलिस्टमा पर्न सफल फोटोहरु आज सार्वजनिक गरिएको छ। १९५ देशबाट ३ लाख २६ हजार वटा फोटोहरु प्रतियोगिताका लागि पठाइएकामा नेपालीको एउटा फोटो सर्टलिस्टमा पर्न सफल भएको छ। दिक्पाल थापाको मह शिकारीहरुको फोटो कल्चर विधाको ओपन कम्पिटिसनमा सर्टलिस्टमा पर्न सफल भएको हो। यो विधामा १३ वटा फोटोहरु सर्टलिस्टमा परेका छन्।… Continue reading
खोटाङमा देखिएका उल्लु नै उल्लु !
Posted on February 4, 2019 February 5, 2019 by Salokya
नाम सुनिरहेको तर कहिल्यै नगएको जिल्ला थियो खोटाङ। गएको हप्ता त्यहाँ जाने मौका पाइयो। तर सदरमुकाम दिक्तेल भने गइएन। शुक्रबार र शनिबार खोटाङको जालपामा उल्लु उत्सव भएको थियो। आठौँ पटक यस्तो उत्सव हुँदा पहिलो पटक हेर्न गइयो। के हुँदो रैछ त उल्लु उत्सवमा हेर्न पाइयो। रमाइलो हुँदो रैछ, जता हेर्‍यो उतै उल्लु। उल्लु नै उल्लु।… Continue reading
जूवा जितेर बनाइएको ‘केशरमहल’को बगैंचा
Posted on January 5, 2019 January 1, 2019 by Salokya
नारायणहिटी राजदरबारको पश्चिमपट्टि अग्ला रूखसहितको बगैंचा भएको विशाल दरबार हाल केशरमहलको नामले चिनिन्छ। चन्द्रशमशेर सत्तामा आएपछि इन्जिनियरहरू कुमारनरसिंह राणा र किशोरनरसिंह राणालाई एक भव्य दरबार बनाउन लगाए। यो महल तयार भएपछि चन्द्रशमशेरले आरुनो साहिँला छोरा केशरशमशेरलाई दिए। त्यसपछि यो दरबार ‘केशरमहल’को नामले प्रख्यात भएको छ। यो दरबारका धेरै सामग्रीहरू पनि बाहिरैबाट ल्याइएका थिए। यो दरबार… Continue reading
आहा गण्डकी ! यी हुन् प्रदेशको प्रतियोगितामा उत्कृष्ट भएका फोटोहरु
गण्डकी प्रदेश उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रवर्द्धनमा भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय पर्यटन खुल्ला फोटो प्रतियोगिताका उत्कृष्ट फोटोहरुको घोषणा बुधबार गरिएको छ। फोटो पत्रकार क्लब,नेपालको व्यवस्थापनमा सबैलाई खुल्ला गरिएको प्रतियोगिता यही असार १९ देखी साउन ५ गतेसम्म अनलाइनबाट फोटो आह्वान गरिएको थियो। प्रतियोगितामा पर्यटकीय गतिविधि विधामा ११९ र पर्यटकीय… Continue reading
यसरी खिचेँ मैले ‘कल्चर एन्ड टुरिजम’ मा पहिलो पुरस्कार जित्ने फोटो
Posted on July 12, 2018 by mysansar
पिजे क्लबले आयोजना गरेको नेपाल फोटो प्रतियोगिता २०७५ का अधिकांश पुरस्कृत फोटोहरु फोटो पत्रकारहरुले जिते। तर कल्चर एन्ड टुरिजममा पहिलो पुरस्कार जित्ने पत्रकार थिएनन्। पुरस्कृत फोटो पनि अनौठो खालको थियो। अहिलेसम्म जीवित देवी कुमारीका राम्रा फोटोहरु मात्रै देखिरहेकाहरुलाई मुख बिगारेको यो फोटो नौलो थियो। फोटो खिच्‍ने किरण श्रेष्ठले यो फोटो खिच्दाको अनुभव यसरी बयान गरेका… Continue reading
बिहान २ बजेदेखि सकियो एक महिने मलमास, माछा अवतार लिएको ठाउँको मेला पनि सिद्धियो
Posted on June 14, 2018 June 14, 2018 by Salokya
तपाईँलाई थाहा छ यो कुन ठाउँ हो? यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको कलंकी कटेपछि सुरु हुने चन्द्रागिरी नगरपालिकामा पर्ने मत्स्यनारायण मन्दिरको दृश्य हो। भगवान विष्णुले माछा अवतार लिएको ठाउँ भनिन्छ यसलाई। यहाँ विगत एक महिनादेखि मेला लागेको थियो। ३० जेठदेखि बल्ल सकियो। हरेक मलमास अर्थात् अधिकमासका बेला यहाँ मेला लाग्छ। जेठ १ गते मंगलबार बेलुकी पाँच बजेर… Continue reading
मोदीको दुई दिने यात्रालाई फोटोमा हेर्दा
Posted on May 13, 2018 May 13, 2018 by mysansar
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी तेस्रो पटक नेपाल भ्रमणमा आए। तीर्थयात्रामा बढी जोड दिइएको यो दुई दिने यात्रामा उनी कहाँ कस्तो भेषमा देखिए, हेर्नुस् फोटोहरु।
यी हुन् हिउँद थिमका ५ सय फोटोमा उत्कृष्ट भएका फोटोहरु
Posted on March 10, 2018 by Salokya
नेपाल पर्यटन बोर्डले फोटो पत्रकार क्लब (पिजे क्लब नेपाल) सँगको सहकार्यमा गरेको हिउँद (विन्टर) थिममा गरेको फोटो नेपाल प्रतियोगितामा २ सय ३० फोटोग्राफरका ५ सय ९ फोटो सहभागी भए। ती मध्येबाट प्रसन्न बज्राचार्यको फोटो सर्वोत्कृष्ट भएको छ। विक्रम मगरको फोटोले दोस्रो तथा प्रमिन मानन्धरको फोटोले तेस्रो स्थान हासिल गरेको छ। पहिलो चरणको जजिङमार्फत् ३८ फोटोग्राफरका… Continue reading